နွေအတွက် လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် မဂ္ဂါဝပ် ၅၀၀ ကျော်ရှိဟု ဝန်ကြီးပြော | ဧရာဝတီ
နွေအတွက် လျှပ်စစ်မီးလိုအပ်ချက် မဂ္ဂါဝပ် ၅၀၀ ကျော်ရှိဟု ဝန်ကြီးပြော
ငြိမ်းပြည့်စုံ| February 21, 2013 | Hits:9,143
| | ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလတွင် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် ဆန္ဒပြသူများ (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
လာမည့် နွေရာသီတွင် နိုင်ငံတဝန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်သည် ၂၀၆၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ မေလအထိ ၁၅၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်သာရှိကြောင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက ပြောလိုက်သည်။
၁၉ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဆဌမ ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
လတ်တလော နွေရာသီ အဝင် ကာလတွင်ပင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ မြို့နယ်တချို့တွင် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် ရရှိသော်လည်း မြို့စွန်ပိုင်းရှိ မြို့နယ် အများစု၌ လျှပ်စစ်မီး မကြာခဏ ပြတ်တောက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်တောက်မည်ကို ပြည်သူများထံ ကြိုတင် အသိပေးထားခြင်း မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံနေရကြောင်း ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
“မီးဖြတ်မယ့် အချိန်ကို ကြိုမပြောဘဲ ဖြတ်ချင်သလို ဖြတ်နေတော့ ကျနော်တို့လို တပိုင်တနိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ တကယ်လို့သာ ဘယ်အချိန်တွေ မီးဖြတ်မယ် ဆိုတာ သိရရင် ကိုယ်က ကြိုတင် ပြင်ထားလို့ ရတယ်လေ” ဟု ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတဦးက ဆိုသည်။
လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့စွန်နှင့် မြို့နယ်အများစုရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူများက ဓာတ်အား မလုံလောက်သောကြောင့် မီးဖြတ်တောက်ရခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြပြီး သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ကမူ သန်လျင်မြို့နယ်အတွင်း ဒီဂျစ်တယ် မီတာများ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်နေခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ မီးပြတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ဒီဂျစ်တယ် မီတာ ပြောင်းတပ်နေလို့ မီးပြတ်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အချိန်က တနေကုန်ပြတ်တာ။ အခုလည်း ဒီဂျစ်တယ်မီတာ တပ်နေလို့ ပြတ်တယ် ပြောပြန်ပြီ၊ ဒါပေမယ့် အခုက ညပိုင်းတွေ ပိုဖြတ်တာ များတယ်။ မီးက အခုလို ပြတ်ချင်တဲ့ အချိန်ပြတ်နေတော့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက်လည်း ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ မီးပြတ်မယ့် အချိန်ကို ကြိုမသိတော့ ရေတင်လျက် တန်းလန်းတို့၊ ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ရင် တန်းလန်းတို့ ဖြစ်ကုန်ရော” ဟု သန်လျင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ အမျိုးသမီး တဦးက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများ၊ တပ်မတော် စက်ရုံများ၊ စက်မှု လုပ်ငန်းများကို ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ မီးဖြတ်မည်ဟု ကြေညာ ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ နေခင်း မီးပေးရမည့် အချိန်များ၊ မနက်ခင်း များတွင်လည်း မီးပြတ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
“မီးက ပြတ်ချင်တဲ့အချိန် ပြတ်နေတဲ့အတွက် မီးစက်တွေ သုံးရတယ်။ ဒီတော့ မလိုအပ်တဲ့ အပိုကုန်ကျငွေက ထွက်လာရော။ ဒါ့အပြင် မီးပြတ်တဲ့ အချိန်မှာ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေက ဂျမ်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့” ဟု ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ် စက်မှုဇုန် (၃) တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ လုပ်ငန်းရှင် ဦးတင်အောင်လှိုင်က ဆိုသည်။
လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ရခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် ရေများကို စုဆောင်းနေရကာ အတတ်နိုင်ဆုံး ညဉ့်နက်ပိုင်း များတွင်သာ အများဆုံး မီးဖြတ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သာကေတမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့မှ သိရသည်။
“မီးပြတ်တာက ဓာတ်အားခွဲ ရုံကနေ ဓာတ်အားမနိုင်လို့ ဖြစ်တာပါ။ ဒီအတွက် ပြည်သူတွေကို အတိအကျ အကြောင်းကြား ထားတာတော့ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ သိတာက အထက်က မီးဖြတ်ဖို့ အမိန့်ပေးရင် ဖြတ်မယ်၊ စက်တွေပျက်ရင် ပြင်မယ်၊ လိုအပ်တာတွေကို လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာပဲ သိပါတယ်” ဟု တာမွေမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဆိုသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုကြောင့် ယခုလတ်တလော ကာလတွင် မီးဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်နေရသော်လည်း နွေရာသီအတွက် မီးစက်များ၊ ဂတ်စ်တာဘိုင်များဖြင့် လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်စေရန် မိမိတို့ အနေဖြင့် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုကြောင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်ခြင်း များသည် ယခုအချိန်ကတည်းက ဖြစ်နေလျက် ရှိသောကြောင့် လာမည့် နွေရာသီ ကာလများတွင် ယခုကဲ့သို့ အခြေအနေ ဆိုးသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရမည်ကို ပြည်သူအများစုက စိုးရိမ် နေကြသည်။
နွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်တောက်မှု လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဖေဖဝါရီလ အထိ အချိန်ပြည့် လျှပ်စစ်မီး ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနှင့် ပေါင်းလောင်း ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတို့ကိုလည်း နွေရာသီတွင် ရေမပြတ်စေရန် ရေကို ထိန်း၍ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်ကို လူ ၁၀ သန်း နေထိုင်နိုင်အောင် ဆောက်မည်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ၂၄ နာရီမီးဖြတ်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပြပွဲ တတိယအကြိမ် ကျင်းပမည်ရန်ကုန် လုံခြုံရေး မစိုးရိမ်ရန် ဦးမြင့်ဆွေပြောကြည့်မြင်တိုင် တဘက်ကမ်းက သောက်ရေခမ်းတဲ့ ရွာများ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Shwe Thway February 21, 2013 - 11:34 am	The government must allow private companies to compete to supply electric power. As long as the government is trying to control and run all businesses, they will not be able to do more than Ne Win did. Hlutdaws must draft regulations for companies and the companies must run businesses according to the regulations. If the companies violate the law, punish them and fine them. Freedom of competition is not in Burma yet. Let them compete under the law and we the people will get benefits as the companies will get the same benefits. A win-win situation will come out of competition. We have plenty of natural resources but we are still kept poor because of government’s unwise policy.
Reply	wa ha ha February 21, 2013 - 2:38 pm	မနှစ်တုန်းကတော့ဇော်မင်းပြောတော့ ပိုတောင်ပိုနေတယ်ဆို….. အမျိုးမျိုးဘဲ…မီးမရတာတော့သေခြာလောက်တယ်….။
Reply	thanwin February 21, 2013 - 8:10 pm	မီးအားမနိုင်တာကို လက်ခံတယ်။ အလှည့်ကျပေးရင်လည်း ပြည်သူကို ကြိုပြောပေါ.။ပြောတာတော့ မီးမပျက် စေရန် စီမံတယ်ဆိုပြီး၊ အခုလို ပြတ်ချင်တဲ့ အချိန်ပြတ်နေတော့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက်လည်း ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ မီးပြတ်မယ့် အချိန်ကို ကြိုမသိတော့ ရေတင်လျက် တန်းလန်းတို့၊ ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ရင် တန်းလန်းတို့ ဖြစ်ကုန်ရော။
မီးက ပြတ်ချင်တဲ့အချိန် ပြတ်နေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ပြည် သူကို လေးစားသင့်တယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက ဘကြီးစိန်နှင့် ပိုင်တယ်ဆိုတော့လဲ ပြည်သူဘယ်လောက်အော်အော် အေးဆေးပေါ.
Reply	Shwe Hninsi February 22, 2013 - 11:29 am	Customers do not consume electric power for free. Why can’t they get power? If the government cannot supply enough electric power, it better invites private companies to supply power and collect fees. The government can receive tons of cash from tax. Electric power is one of the basic necessities of human life. Cooking with firewood is contributing deforestation nationwide. Putting the sign “Don’t cut the trees” will not protect our beautiful forest. If we have enough electric power, who will want to cut trees for no reason? Useless and incompetent government must yield the path to build our nation to private companies. The current regime is still practicing monopoly in running the country. Monopoly will not work to serve 60 million citizens of Burma.